Olee otú n'ụzọ zuru ezu ihichapu SD kaadị na android ekwentị
Ma ị chọrọ na-ere gị Android ekwentị ma ọ bụ na ị dị nnọọ chọrọ inye ya, ọ dị oké mkpa na ị ihichapu gị SD kaadị. Ebe ọ bụ na e dere onwe gị faịlụ na data, erasing ọ ga-enyere gị aka kpuchido nzuzo gị. Erasing gị SD kaadị nwere ike mere ụzọ dị iche iche, ị nwere ike ihichapu ozugbo gị Android ekwentị, i nwere ike iji akpan iji softwares ihichapu SD kaadị na ị pụrụ nanị etinye SD kaadị na kọmputa gị ma usoro ya. N'ọnọdụ ka ukwuu, erasing na software bụ ihe ngwọta kasị mma dị ka ọ na e mere na-eme nke ahụ. Erasing kpọmkwem site Android ekwentị na-adịghị n'ụzọ zuru okè na ihichapu SD kaadị ebe ị n'ihe ize ndụ adịkwa ọzọ data echekwara na ebe nchekwa ekwentị gị dị ka ozi kọntaktsị, ndetu, wdg Ke ibuotikọ emi, m ga-egosi gị otú ị ihichapu gị SD kaadị na android ekwentị aka na m ga-atụ aro ụfọdụ ngwa i nwere ike iji ihichapu ma jikwaa gị SD kaadị. Ọ na-ekpe n'ihi na ị na-ahọrọ onye na-arụ ọrụ kasị mma maka gị.
Eduzi ka n'ụzọ zuru ezu ihichapu Android ekwentị SD kaadị
Erasing gị Android SD kaadị nwere ike nweta nri si Android ngwaọrụ inbuilt ntọala enweghị eji ihe ọ bụla ọzọ na-ngwa. Ọ bụrụ na ị chọrọ, ị nwekwara ike iji a ọzọ ngwa iji nweta otu results ma ọ bụ ọbụna mma na ya pụta mgbe ụfọdụ. Ndị a-atọ ọzọ ngwa dị ma dị ka Android ngwa na software maka Windows ma ọ bụ Mac. Ihe ị na-ahọrọ ga-nnọọ adabere na gị na otú ị chọrọ ịga banyere ya.
Anyị a ga-ewere a lee anya na otú ihichapu SD kaadị na ihe gam akporo ngwaọrụ na iji inbuilt ọnọdụ nke ekwentị. Nanị na-eso nzọụkwụ dị ka e n'okpuru.
Nzọụkwụ 1: Open ntọala ngwa si ​​menu ka "Nchekwa"
Nzọụkwụ 2: gbadaa na na ala na enweta "Format SD Kaadị"
Ọ bụrụ na ị na-enye ndị Android ekwentị pụọ ma ọ bụ na-ere ekwentị, ọ kasị mma ma ọ bụrụ na ị Factory Tọgharia ekwentị. Nke a erases ihe niile na ekwentị gị na-eme ka ntọala azụ otú ọ dị mgbe ị na-zụọ ya. Nke a bụkwa isi ụzọ chedo nzuzo gị n'ihi na ọ erases niile kọntaktị gị, ozi ịntanetị, ozi, na ndetu, na ihe ọ bụla ozi onwe ndị ọzọ na ekwentị.
Top 3 Android SD kaadị management na erasing ngwa
E nwere ọtụtụ software si n'ebe na pụrụ inyere gị aka jikwaa gị Android na ngwaọrụ ma SD kaadị, ma nanị otu njuaka ha dị ukwuu. A bụ ndepụta nke 3 top Android SD kaadị management na erasing ngwa na i nwere ike ịhụ na ahịa taa. Anyị na-akwado ị ga-agbalị ha niile na-arapara n'otu na-arụ ọrụ ndị kasị mma n'ihi na ị. Ndepụta a na-akwadebe na iji nke anyị mmasị na otú ndị kasị mma nke 3 edepụtara na mbụ na na. Ka ego ha.
Airdroid bụ ngwa na-ahapụ gị jikwaa gị Android ngwaọrụ a ihe oru oma n'ụzọ na na kwa kpọmkwem iji ihe nchọgharị weebụ, na-enweghị mkpa maka na ijikọ na ngwaọrụ a eriri USB. Ọ nwere ọtụtụ ihe ndị ọzọ bara uru atụmatụ na-eme ka ọ pụta n'etiti ndị ọzọ a na udi.
Detuo faịlụ na izipu ozi
View oku na ndekọ, na kọntaktị na Ịma Ọkwa
Easy faịlụ nyefe si PC ka Android ngwaọrụ ma ọ bụ Anglịkan.
Ike izipu ozi ederede nri na kọmputa gị.
Dị na Windows, Mac, na dị ka a Web ngwa.
Non-intrusive mgbe egosi Ịma Ọkwa.
Eriri-ejikọ gị PC iji idetuo faịlụ, na-agụ, na-eziga ozi ederede, na ngwa mmelite.
Higher Ram ojiji ọbụna mgbe na-adịghị eji na Airdroid software.
Nchekwa onwe amalite mgbe ị buut windows, si otú na-eme ka OS buut nwayọọ nwayọọ.
Akpaghị aka syncs ka smartphone bụrụ na ọ bụ na nso nke ikuku na netwọk.
Ọ bụ a free ngwa na-ahapụ gị jikọọ gị Android ngwaọrụ gị na kọmputa ma site na eriri USB na n'elu WiFi njikọ. Ị nwere ike iji ya rụọ ọrụ nke ọma jikwaa ngwa ọdịnala na ngwaọrụ gị na nyochaa usoro ọmụma dị ka mma. N'ozuzu, ọ bụ oké ngwaahịa nwere na-eji nke gam akporo ngwaọrụ management.
Enye gị ohere ka mmekọrịta kọntaktị, aga-eme, kalenda, na ndetu, na ihe ncheta n'etiti Android na ngwaọrụ ma Outlook.
Na-enye ohere Outlook nchekwa na edemede syncing dị ka mma.
Mmekọrịta ngwa, photos, music, na ọbụna videos n'etiti Android ngwaọrụ na PC.
Na-akwado USB na WiFi njikọ dị n'etiti Android ngwaọrụ na PC.
Bara uru Outlook ka Android synchronizer.
Mekọrịta, tinye ma ọ bụ nkwado ndabere na mpaghara data.
Ọtọ User Interface.
Nyefee data n'etiti mpaghara gị na kọmputa draịva na gị Android ekwentị.
Higher Ram ojiji ọbụna mgbe na-adịghị eji na Mobisynapse software.
Freeware version anaghị akwado akpaka syncing site Wi-Fi na USB.
MOBILedit bụ ihe ọzọ na oké ngwá ọrụ na-enye gị jikwaa gị Android ngwaọrụ eji gị PC. Nke bụ eziokwu bụ na ọ bụ dakọtara na ọ fọrọ nke nta ụdị ọ bụla nke na ekwentị mkpanaaka otú ma ọ dị mkpa i nwere ike iji ya na gị na ngwaọrụ ndị ọzọ dị ka nke ọma na ọ bụghị nanị ndị Android otu. MOBILedit nwekwara jikọọ ekwentị gị na PC gị site ma eriri USB na WiFi.
-Ejikọ gị na ngwaọrụ PC site na eriri, Wi-Fi na Bluetooth.
Akpaghị aka mmekọrịta media faịlụ, kọntaktị na ndepụta, ndenye kalịnda, na SMS ozi.
Conveniently nweta ugboro ugboro ji faịlụ.
Mfe jikwaa gị Android data si PC.
Nyefee data na site na Android ngwaọrụ.
Ekwe ka ị na-ejikọta iPhone na Android site Wi-Fi.
Akwado iche iche ozi na ọrụ site na Send, na-enweta, Archive, search na ebipụta ozi ederede.
Ị pụrụ nanị imelite ekwentị data na PC.
Ọ bụ ọnụ.
Ọ dịghị Download Centre.
> Resource> ihichapu> Olee otú iji Ofụri Esịt Ihichapu SD Kaadị na android ekwentị